IDiploma-Ingcali yemisebenzi yoLuntu -Geofumadas
Ikhaya/IiDiploma zeAulaGEO/IDiploma-Ingcali yemisebenzi yoLuntu
Le khosi ijolise kubasebenzisi abanomdla kwicandelo lemisebenzi yoluntu, abafuna ukufunda izixhobo kunye neendlela ngendlela ebanzi. Kwangokunjalo, kwabo banqwenela ukongeza ulwazi lwabo, kuba bayinxalenye yesoftware kwaye banqwenela ukufunda ukulungelelanisa uyilo lwemisebenzi yoluntu kwimijikelo yabo eyahlukeneyo yokufumana, uyilo kunye nokuchazwa kweziphumo kwamanye amanqanaba enkqubo.
Yenza amandla okufumana, ukuyila kunye nokuma kweemodeli zomsebenzi woluntu. Le khosi ibandakanya ukufunda kwe-Civil 3D, enye yeenkqubo ezisetyenziswa kakhulu kwicandelo lobugcisa bendawo; kunye nokusetyenziswa kwezixhobo apho ulwazi lunxibelelana khona kwezinye izigaba zenkqubo, ezinje nge-InfraWorks. Ukongeza, ibandakanya imodyuli ye-AutoCAD yolawulo olubanzi lweekhompyuter ezincedisayo zoyilo ezingachazwanga kwiimodyuli ze-3D.
Izifundo zinokuthathwa ngokuzimeleyo, ukufumana idiploma kwikhosi nganye kodwa "IDiploma Ingcali yemisebenzi yoLuntu” ikhutshwa kuphela xa umsebenzisi ethathe zonke iikhosi kuhambo.
Izibonelelo zokufaka isicelo kumaxabiso eDiploma- Ingcali yezoLuntu
I-AutoCAD …………… ye-USD 130.00 19.99
Inqanaba le-3D yaseKhaya 1 …… i-USD 130.00 24.99
Inqanaba le-3D yombuso 2 …… i-USD 130.00 24.99
Inqanaba le-3D yaseKhaya 3 …… i-USD 130.00 24.99
Inqanaba le-3D yaseKhaya 4 …… i-USD 130.00 24.99
IinfraWorks…………..USD 130.00 24.99
IDiploma-iNgcali yokuSebenza kwe-BIM